Come Eseguire In Modo Efficiente Internet Marketing: La Guida Da Semalt
Mawebsite akawanda anouya zuva nezuva. Izvo zvinonetsa kuti newbie ibudirire mumakwikwi anhasi. Nokuda kweizvi nezvimwe zvikonzero zvakawanda, kutengeserana kwepaIndaneti kunouya kuzotanga kubatsira kutanga kuwana nzvimbo iripo paIndaneti, iyorichava rakasimba zvakakwana kuti tishandise bhizinesi rinobatsira. Somuenzaniso, Search Engine Optimization (SEO) inobatsira pakuita mawebsitekuwana nzvimbo yakanaka paIndaneti.
Nyanzvi dzeEndaneti dzinoshandisa nzira dzakawanda dzekugadzira kuvapo kweIndaneti yavomararamiro akasiyana-siyana uye anovimbisa kuti vanowana backlinks, motokari, inotungamirira uye, kunyanya kukosha, vatengi. Saka ungashandisa sei internet kushambadzira kwebhizimisi rako? Ivan Konovalov, nyanzvi inotungamirira Semalt Digital Services, anotsanangura mitemo yekushanda nekambani yekutsvaga kwepamusoro zvakajeka.
Chikanganiso chakakura icho vashandi vezvemabhizimisi vakawanda vanoita kutanga kwe-e-commerce website kubva pamhanje yevamwe vavo vakabudirira. Vanotarisa mifananidzo iyo shamwari dzavo dziri kuita uye vanomhanyira kutanga webhusaitipasina mumwe munhu achiziva zvinotora kuti zvibudirire kubudirira. Inotengeswa neIndaneti inotora nguva yakareba, inoshandisa vashandisi ku yakakwirira kwazvo. Kuti kubudirire kubudirira, kushivirira nekutsungirira ndiko zvinhu zvinokosha, pamwe chete nechisimba uye kushanda nesimba mukubatanidza zvakasiyana-siyanaonline marketing marketing methods. Semuenzaniso, kubudirira kweSeO mushandirapamwe kunotora kwemwedzi mitanhatu kuti utange kuwana mhinduro dzakawanda.
Shandisa deta uye metrics
Kuongororwa kwemashoko nemamatriki zvakakosha pakuvimbisa kusimba kweyako yepaIndaneti. Semuenzaniso, chero urongwa hwekutengesa kana hutano hunoenderana nechirongwa chekuita. Somugumisiro, zvimwe zvakagadzirwamaitiro ekugadzirisa masangano anofanira kunge aripo. Aya mabhadhibhodhi anobatsira kuti ucherechere kufambira mberi kwako munguva yose yekudhinda. In zvimwe zviitiko, munhu anogona kushandisa ruzivo rwakakosha kuti aongorore ROI yezvipuro zvakasiyana siyana uye aite kugadziriswa kunodiwa kuti asvike chinangwa chemugadziro.
Shandisa nzira dzakasiyana
Icho chinangwa chakanaka chekuwedzera mapurogiramu ekutengeserana muIndaneti mumitambo mitsva.Mitsva mitsva nemitambo inowedzera mutengi wako. Uyezve, kana imwe yemakambani emakambani ikakundikana, iwe ucharamba uchikwanisa kuita marikuburikidza neimwe nzira. Iyo pfungwa yakanaka nokuti imwe yemigwagwa inokundikana pakupedzisira. Chikamu chekuvaka webhusaiti, zvakakosha kukuumba mapeji ehuwandu ehuwandu hwewebsite yega yega pahuwandu hunokosha hwakadai semabloggi uye zvigadzirwa zvinogona kusvika kune vashandi vako mumagariro evanhunzvimbo. Kushandisa zvikamu zvevhidhiyo uye dzimwe nzira dzinobatsira kukubatsira kuverenga kuve paIndaneti nenzira dzakawanda. Kuwana vatengi kubva pane zvakasiyana-siyanaNzira dzinoreva kuti bhizinesi rako richaramba rakasimba kunyange kana imwe nzira inowira.
Zvinokwanisika kusvika kune zvakasiyana-siyana zvemakakani kushandisa shanduro isina kujekamaitiro. Somuenzaniso, kutenga vatengi kunogona kubudirira kuburikidza nemigwagwa yakawanda sehuwandu hwemagariro evanhu. Zvisinei, kubhadhara mari shomakubatsira rubatsiro rwako rwekutengeserana rinogona kubatsira kukubatsira kuti uwedzere kubatanidzwa. Dzimwe nguva, zvakakosha kuisa mari shomananamumushandirapamwe wako. Kubudiswa uku kunogona kukusiya usina kusununguka kusvika kune imwe huru pane zvimwe zvikamu zvekutengeserana kwemaInternet asi zvichidaro kuvandudzakufambira mberi. Nyaya yepawebsite yakanaka yekubhadhara zvikwata zvinosanganisira Google AdWords uye social media platform Facebook Source .